विचार / विश्लेषण महराबारे बेइजिङ्मा यस्तो संशय Tuesday, 16 Aug, 2016 12:02 PM
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको बिशेष दुत बनेर सरकारका एक उप–प्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा साउन ३१ गते सोमबार बिहान बेइजिङ्ग प्रस्थान गरेका छन् । दुवै ठूला छिमेकी देशमा विशेष दुत पठाएर ती देशलाई नेपालले दिन खोजेको सन्देशबारे सरकारले भनेको छ– ‘समसामयिक’ परिस्थितिबारे जानकारी गराउने र लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दुबै देशका रास्ट्राध्यक्ष हरुको सम्भावित नेपाल भ्रमण पक्का गराउने बिषयमा सरकारको यो ठोस कदम हो । यसका अतिरिक्त नेपाली प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपतिको ती दुई देशमा हुने भ्रमणबारे पनि चर्चा हुनेछ । नेपालका कतिपय मूलधारका दैनिकमा काम गर्ने केहि (तीन जना) रिपोर्टरलाई चिनियाँ रास्ट्रपति सी जिनपिङ्को भ्रमण हुँदा नेपालले के गर्ने तयारी गरेको थियो भनी छुट्टा छुट्टै रिपोर्ट गर्ने जिम्मेवारी भारतीय विदेश मन्त्रालयले दिएको रहेछ । कसले बिगार्यो सम्बन्ध ?
बिशेष दुत पठाउनुको अर्थ ती देशलाई नेपालले उच्च महत्व दिएको त हो । तर बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्ने भनी चालिएको यो कदमले सम्बन्ध कहाँ र कसरी बिग्रियो भन्ने उल्लेख गरेको छैन । नेपालको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको गत बर्ष नाकाबन्दीसँगै हो । जब मधेस आन्दोलनको ढाडमा टेकेर नेपाल बिरुद्ध भारतले नाकाबन्दी लगायो, तब सम्बन्ध रसातलमा पुग्यो । बिस्तारै दुबै देशको पहलमा त्यो सम्बन्ध सुध्रिएको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणपछि लगभग सामान्य तहमा सम्बन्ध फर्क्यो । तर दाशहरुसँग बानी परेको भारतलाई स्वाभिमानी ओली मन परेन । यसैलाई भारतले सम्बन्ध बिग्रेको भन्ने गरेको छ, र यहाँको बर्तमान सरकारले त्यही भारतीय रटान दोहोर्याउने गरेको छ, जुन खेदजनक छ । उता नेपालसँग ओलीकै कार्यकालमा भर्खरै पारवहन लगायतका ३७ वटा आपसी सहयोग सम्झौता गरेको चीनसँग सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने बिषय त झन् ठूलो झुट हो । चीन यसै पनि नेपाल वा छिमेकमा सरकार वा सत्ता परिवर्तनबारे निरपेक्ष रहन्छ । यसपल्ट सरकार परिवर्तनदेखि नै संशयमा रहेको चीनलाई वर्तमान सरकारको कदमले थप सशंकित बनाएको छ । बेइजिङ् विश्लेषण
बेइजिङ्ग नेपालबाट दिल्ली भन्दा टाढा अवस्य छ । तर त्यहाँ उपलब्ध सूचना र जानकारी एबं मिहिन विश्लेषणको लेभलले धेरैको सातो लिन्छ । सतही काम गर्ने बानी परेका नेपाली नेता र कर्मचारीले त्यसको छेउ–पुच्छर भेट्न सक्दैनन् । भारत समेत त्यसको नजिकसम्म पनि छैन । अर्का उप–प्रधान मन्त्री निधिको भारत भ्रमण महराको चीन भ्रमणपछि तय गरिएको बेइजिङ्को बुझाइ छ । यसको सीधा अर्थ चीन भ्रमणको ‘परिणाम’ले भारत भ्रमणको ‘अतिरिक्त’ एजेन्डा निर्धारित गर्नेछ भन्ने हो । सँगसँगै नेपालका कतिपय मूलधारका दैनिकमा काम गर्ने केहि (तीन जना) रिपोर्टरलाई चिनियाँ रास्ट्रपति सी जिनपिङ्को भ्रमण हुँदा नेपालले के गर्ने तयारी गरेको थियो भनी छुट्टा छुट्टै रिपोर्ट गर्ने जिम्मेवारी भारतीय विदेश मन्त्रालयले दिएको रहेछ । पहिले पहिले नेपालको पररास्ट्र मन्त्रालयबाटै सूचना प्राप्त गर्ने गरेको भारत केपी ओलीको चीन भ्रमणताका भने जिल्लिएको रहेछ ।
पहिले पहिले नेपालको पररास्ट्र मन्त्रालयबाटै सूचना प्राप्त गर्ने गरेको भारत केपी ओलीको चीन भ्रमणताका भने जिल्लिएको रहेछ । नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता हुँदैछ भन्ने तथ्य दिल्लीले नपत्याएर भएको केहि दिन पछिका अन्य भेटमा चीनको विदेश मन्त्रालय एबं दिल्ली स्थित चीनका राजदूतलाई ‘भएकै हो र ?' भनी सोधेको रहेछ । प्रचण्डको पहिलो कार्यकालमा पनि चीनसँग नयाँ मैत्री सन्धीको ड्राफ्ट बनेको थियो । चीनसँग प्रस्तावित नयाँ मैत्री सन्धिको ड्राफ्ट पहिल्यै दिल्ली पुगेपछि पररास्ट्र मन्त्रालयप्रति विश्वास घटेको थियो । अहिलेका क्षमतवान सचिब शंकर बैरागीले सुधारको प्रयास गरे पनि परिणाम कमै छ । अहिले बेइजिङ्मा बढेको थप आशंका महराको पात्रता र पृष्ठभूमिका कारण हो । महराको संलग्नतामा केहि बर्षअघिको विवादास्पद ‘५० करोड टेप प्रकरण’ले चीनलाई बिनाकारण र निस्पृह बस्दाबस्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा घचेट्यो । यसबर्ष ओली सरकार ढाल्न महराको दिल्ली दौडले अतिरक्त प्रश्न उब्जाएको छ । के होला बेइजिङ्मा ?
महराको बेइजिङ् भ्रमणमा सद्भावना आदान प्रदान हुनेछ, नेपाल–चीन मित्रताबारे छलफल हुनेछ । महराले राष्ट्रपति सी जिनपिंङलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिनुका अतिरिक्त ‘पूर्ववर्ती ओली सरकारले गरेका सम्झौता लागू गर्ने प्रतिबद्धता’ दोहोर्याउने छन्, जसको प्रष्ट उल्लेख सिन्ह्वा सँगको अन्तरवार्तामा उनले गरेका छन् । तर अहिले नेपालमा धेरैले सोचेजस्तो राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण मिति बेइजिङ्मा अहिले नै तय हुने अधार बनेको छैन । पहिलो, निधिको भारत भ्रमणअघि मित तय हुन् सक्दैन । दोस्रो, तयारीका लागि नेपालले १५ दिनभन्दा ज्यादा समय पाउनेछैन । तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण– मिति निर्धारण गर्न चीनबाट हुने तीन अलग निकायको नेपाल भ्रमण भएकै छैन । यद्यपि भ्रमण अवश्य हुन्छ, संशय छैन । यसको स्तर, प्रभाव र शैलिबारे पछि चर्चा हुने नै छ ।
नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता हुँदैछ भन्ने तथ्य दिल्लीले नपत्याएर भएको केहि दिन पछिका अन्य भेटमा चीनको विदेश मन्त्रालय एबं दिल्लीस्थित चीनका राजदूतलाई ‘भएकै हो र ?’ भनी सोधेको रहेछ ।
काठमाडौं वा दिल्लीको अहिलेको सत्ताले नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको सत्य के हो भने इतिहासमा चीन बलीयो हुँदा छिमेकीहरुको राष्ट्रिय हितको समेत रक्षा भएको छ । चीनसँग दूरी थप्ने होइन, हातेमालो गर्दै विकासमा सहकार्य आवस्यक छ । यसो भन्नु भारतको बिरोध होइन ।